“Nama keenya qofa miti Leenca keenya Oromiyaa keessaa qabamee ‘sidist kilo’tti hidhamee jiruyyu ni hiiksifna!” - Kichuu
HomeAfaan OromooVideos“Nama keenya qofa miti Leenca keenya Oromiyaa keessaa qabamee ‘sidist kilo’tti hidhamee jiruyyu ni hiiksifna!”
“Nama keenya qofa miti Leenca keenya Oromiyaa keessaa qabamee ‘sidist kilo’tti hidhamee jiruyyu ni hiiksifna!”
“Gaaddisni Waraanni Bilisummaa Oromoo guyyaa tokko jalatti boqote bara baraan hin coologu! Galanni WBO akka itti himanii fixan hin jiru. Galanni isaanii bilisummaa haa ta’u!
Biyya abbaa keenyaa dhabnee qaroominnis guddinnis hin jiru. Biyya abbaa keenyaaf falmachuuf akka mootummaan Itoophiyaa barbaadutti qofa utuu hin taane, akka mootummaan addunyaa barbaadutti falmachuuf qophiidha. Biyya abbaa ofii falmachuu dhiisuun cubbuudha.” jedhe kol. Gammachuu Ayyaanaa ayyaana amajji 1 waajjira ABOtti kabajamu irratti.
Koloneelichi galma guutuu raase!
Kabaja guddaatu malaaf!
” Dhaamsa Waggaa Haaraa, 2020
Amajjii 01, 2020″
Oduu Gammachuu Jiraattota G/H/G/Wallaggaaf
Waajjirri ABO Godina Horroo Guduruu wallaggaa Magaalaa shaambuu guyyaa boruu qabee tajaajila ni kenna. Guyyoota torbaaf marii Qaama mootummaa waliinii fi command post waliin goone milkiin xumurachuun Amajjii 1/2020 tti milkiin deebii arganneerra. Amajjii 2/2020 waan saaqamuuf erga cufamee irra deebi’ee ummataaf banaa taha. Wal argaan guyyaa borii waajjira ABO Magaalaa Shaambuutti haa tahu. Bulchaan Godina Horroo Guduruu wallaggaa obbo Jabaa Addunyaa fi itti gaafatamaan command post godinichaa koloneel Yemaaneen gargaarsa nuuf gootaniif galatoomaa.
Osoo shirri nurratti xaxamuu akka banannee Keessatti hojjennuuf dhiibaan isin nuuf gootan guddaadha.
Amajji 1 2020: Maqaa Barattoota wallaggaa Yuunibarsiitii balaa konkolaataan lubbuun isaanii darbe.
Truck-minibus collision kills 12 in Ethiopia/Oromia